Into eyenzekayo entliziyweni ye-Milky Way galaxy. Ingxowa emnyama emnyama - egama linguSagittarius A * - elalikho ngqo kwinqanaba lethu lemilambo ngokuqhelekileyo lizola, kumngca omnyama. Iimidlo ngezihlandlo ngeenkwenkwezi okanye i-gas kunye nothuli oluye lwahlaselwa kumcimbi walo. Kodwa, ayinayo ijetshi ezinamandla njengeminye imigodi emnyama ephezulu. Kunoko, kuthulile.
Kungekudala uye yathumela "ingxoxo" ebonakalayo kwietelesiko ze-x ray.
Luhlobo luni lomsebenzi oluya kubangela ukuba luvuse ngokukhawuleza kwaye luqale ukuthumela ukukhishwa?
Ukwaziswa ngedata, izazi zeenkwenkwezi zaqala ukukhangela izizathu ezinokwenzeka. I-Sagittarius A * ibonakala ivelisa malunga ne-x-ray ekhanyayo zonke iintsuku ezilishumi okanye njalo, njengoko kuthathwa ngongamela kwangexesha elide eyenziwa nguChandra X-ray Observatory , Swift , ne- XMM-Newton . Emva koko, ngokukhawuleza ngo-2014, umgodi omnyama wamphakamisela umyalezo wakhe-ukuvelisa i-flare yonke imihla.
Indlela eValayo iqalisa iSgr. A * Ukuxoxa
Yintoni eyayibacaphukisa umda omnyama? Ukuphakanyiswa kwimizila ye-x-ray kwenzeka emva kwangoko
Indlela esondeleyo kwimixobo emnyama ngezinto ezingaqondakaliyo izazi zeenkwenkwezi zithi iG2. Iingcali zeenkwenkwezi zangexesha elide zicinga ukuba i-G2 yayiyifu elide legesi kunye nomhlaba othunyayo ojikelezayo emngceleni omnyama. Ngaba ingaba ngumthombo wezinto eziphathekayo kumxhasi omnyama wokutya? Ekupheleni konyaka ka-2013, idlule kakhulu kufuphi neSagittarius A *. Indlela esondeleyo ayizange iphule ifu (eyona nto yayingenokwenzeka ukuba oko kwenzekayo).
Kodwa, ubukhulu bebhola elimnyama belulula ifu kancane.
Oko kwakubangela imfihlelo. Ukuba i-G2 yayiyifu, kungenzeka ukuba isetyenziswe ngokukhawuleza ngokukhangela kwamandla. Azange. Ngoko, yiyiphi i-G2? Ezinye izazi zeenkwenkwezi zibonisa ukuba ingaba yinkwenkwezi enecokoyi enothuli ehlanganiswe kuyo.
Ukuba kunjalo, umgodi omnyama unokuyifumana ifu elithile elitshulayo, kwaye xa izinto ezijongene nomcimbi we-black hole, zazibe zitshiswa ngokwaneleyo ukuba zinike ii-x-ray.
Enye imbono kukuba i-G2 ayinanto enxulumene nokukhutshwa kombhobho omnyama. Kunoko, kukho enye inguqu kummandla obangela iSagittarius A * ukunika ii-ray zangaphezulu kwii-ray ngaphezu kweqhelekileyo.
Enye imfihlakalo inika inzululwazi enye ibhekiselele indlela izinto ezixutywa ngayo kwi-galaxy yethu engummango omkhulu omnyama kwaye kwenzekani kuyo xa sele isondele ngokukhawuleza ukuze uzive ukukhangela kwe-Sagittarius A *.
Iimilo ezimnyama kunye neGalaxies
Imihlathi emnyama iyabonakala kuyo yonke imilambo, kwaye i-supermassive ikhona ezintliziyweni ezininzi ze-galactic cores. Kwiminyaka yakutshanje, izazi zeenkwenkwezi ziye zafumanisa ukuba ezi zimbombo ezimnyama eziphambili ziyingxenye ebalulekileyo yokuguquka kwemithala, echaphazela yonke into esuka kwimoya yenkwenkwezi ukuya kwimilo yegalaxy kunye nemisebenzi yayo.
I-Sagittarius A * isona sitshixo esiphezulu se-supermassive kuthi-sihlala kumgama wama-26,000-ukukhanya-iminyaka ukusuka kwiLanga. Omnye osondeleyo osondeleyo ulele entliziyweni ye -Andromeda Galaxy , kumgama we-2.5 million-light years-years. Ezi zimbini zibonelela ngeenkwenkwezi ze-astronomers nge-"close-close" ngamava anjalo kunye nokunceda ukuphuhlisa ukuqonda indlela abayifumene ngayo nendlela abaziphatha ngayo kwiindidi zabo .
Ukuhamba ngeSystem System: I-Planet Jupiter
Umehluko phakathi kwe-Iran ne-Iraq
IsiNgesi soLwazi lwezoLwazi
UHenry David Thoreau
Uhluko phakathi kweCelsius neCentigrade
Indlela Yokuba Ingxaki Ephumelelayo yeSolver
5 Iincwadi Ezinkulu zeKholeji-Bound Kids
I-Top 20 Country Music Umculo Iingoma zama-1980
I-10 ephezulu kwi-Veteran Back Back to School List
Yintoni ethi "À La Une" ithetha ngesiFrentshi?